SATA MIFEHY NY MPANOHITRA ETO MADAGASIKARA : « Tsy maintsy ilàna lalàna mafy orina »
Miantoka feno ny fahamarinan-toeran’ny fitondrana ny fijoroan’ny mpanohitra ara-dalàna. Hanaporofoana mivaingana ny fanajana ny demokrasia ihany koa. 2 septembre 2019
Manoloana izany dia tsy maintsy mifototra anaty lalàna mafy orina io lalàna natao hifehezana ny mpanohitra io, hoy ny fanehoan-kevitra noentin’ny filohan’ny vaomieran’ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana eo anivon’ny Antenimieran-doholona.
Hatreto dia mbola hiandrasana ny fanapahan-kevitr’ ireo loholona ny mahakasika ilay lalàna mifehy ny mpanohitra. Raha tsiahivina dia isan’ireo lahadinika telo lehibe nandalo teo anatrehan’ireo parlemantera io lalàna io . Naharitra roa andro ny niadian-kevitra mahakasika izany teny Tsimbazaza raha tsy vita hatramin’ny farany kosa ny teny amin’ny Antenimieran-doholona, izay voatery hiandrasana fivoriana tsy ara-potoana manaraka indray. Antony, ny tsy maintsy handinihana lalina an’io lalina io.
Nambaran’ny filohan’ny vaomieran’ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana eo anivon’ny lapan’Anosikely, ny loholona Rakotongavelonjanahary Modeste fa manana fahasahiana lehibe ny mpitondra ankehitriny amin’ny fanomezana toerana ny mpanohitra mba hiarovana ny demokrasia. Noho izany dia rariny loatra, hoy izy, raha toa ka lalàna mafy orina no apetraka mba tena ho tombontsoan’ny firenena sy ny vahoaka Malagasy. Araka ny fanehoan-kevitra noentiny dia tsy azo hatao maikamaika ny fandaniana an’io lalàna io izay hiankinan-javatra maro eo amin’ny fanatanterahan’ireo mpanohitra ny asany. “Tsy tokony mitororoto na handanindany an’io lalàna io ao anatin’ny hankamehana satria ny ho avin’ny firenena no jerena”, hoy izy. Taorian’ny nandanian’ireo solombavambahoaka ity lalàna mifehy ny mpanohitra ity avy hatrany dia nalefan’izy ireo teny amin’ny antenimieran-doholona izany. Nilaza anefa ny loholona Rakotongavelonjanahary fa ao anatin’io tolo-dalàna io no mbola hanaovana fanadihadiana.
“Mbola amin’ireo andininy ao anatin’ity tolo-dalàna ity tokony ilaina famakafakana sy fanadihadiana mba hahafahana mamoaka zavatra izay eken’ny rehetra satria ny loholona dia natao ho andrim-panjakana hiaro sy hampijoro izany fahamarinan-toeran’ny fitondram-panjakana izany”, hoy hatrany ny fanehoan-kevitra noentiny. Marihina fa ny teo anivon’ity antenimieran-doholona dia nanatanteraka atrikasa fakan-kevitra niarahana tamin’ireo fiaraha-monim-pirenena sy ny antoko politika niompana indrindra amin’ny fandrafetana ity lalàna ity. Heverina fa miainga avy amin’izay no hamoahan’izy ireo ny heviny amin’ity lalàna ity ary anisany nampihemorana ny fandaniana an’io satan’ny mpanohitra io ihany koa.